August 2019 - TechnoMag
Zimbabwe can leverage on the already laid technological infrastructure to kick start e_commerce while advancing unique customers satisfaction techniques via information technology Speaking at the customer service and service delivery … Read More
Toyota South Africa Motors (TSAM) has collaborated with Altron and Vodacom to introduce Toyota Connect, a cloud-based Internet-connected intelligence platform aimed at providing in-mobility WiFi connected services. The partnership, announced today in Johannesburg, will … Read More
Apple addressed consumer concerns over non-apple employees gaining access and listening to Siri recordings in a statement released on Thursday, 28 August 2019. In the statement, the technology company says it … Read More
NetOne has added its voice in the foreign exchange sphere, allowing its subscribers to also bur or sell their foreign currency using One wallet service. In a statement NetOne posted … Read More
South Africans who are on MTN network are said to be receiving access to certain websites and apps at no charge. This is as a result of a partnership between … Read More
In a bid to extend network coverage in rural and remote areas,the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) is inviting expressions of interest from qualified companies for the … Read More
Zimbabwe’s largest mobile network by subscriber base, Econet has increased its data tariffs for the second time in a month, piling pressure on the consumer. This review comes after the … Read More
Two Zimbabwean creatives have been selected for the second year of the MultiChoice Talent Factory Academy for Southern Africa. Hailing from the city of Kings, Nkosilesisa Ncube and Nelson Madzima, … Read More
Of late the load-shedding schedules seem to have changed for the better after the recent electricity import deal with South African firm Eskom. This was confirmed by Zimbabwe’s Minister of … Read More
Econet Media, a branch of Econet Wireless International has recently put up its shares in the satellite broadcast business in 13 countries for sale after its operations proved to be … Read More